Global Voices teny Malagasy » Miverina Indray Ny Tetiandro Miboridandridan’ireo Makedoniana Ao Amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Janoary 2016 7:11 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Saripika, Vonjy Voina, Zavakanto & Kolontsaina
Tetiandro Twitter ho an'ny 2016. Saripika an'i Zvonko Plavevski, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 4.0.
Miverina indray ilay tetiandro miboridandridana nataon'ireo Makedoniana mpampiasa Twitter .
Amin'ny fampiasàna ny tenifototra #ТвитерКалендар (“Tetiandro Twitter”) nanatevin-daharana ny mpakasary Zvonko Plavevski  (@Giotto_mkd ) ny roa ambinifolo amin'izy ireo, tamin'ny fanaovana fanambaràna iray ara-javakanto ho amin'à tanjona tsara, miaraka amin'izany koa, ny fihantsiana ny toetsaina mikombon'ny fanjakan-dehilahy.
Nandefa  antso iray ny mpanoratra azy tamin'ny volana Oktobra, ary nampiasa koa ny fanadihadiana tamin'ny Twitter  mba hamaritana hoe firy amin'ireo vola voaangona tamin'ny fivarotana tetiandro no ho laniana.
Ny tetiandro ho an'ny taona 2013 nanangonam-bola hanaovana sa soa ho an'ny ady atao amin'ny homamiadana , raha toa ka ny iray ho an'ny 2014 nampiroboroboana ny fanabeazana ara-pananahana sy ny miralenta .
Niato kely ny hetsika ny taona 2015 saingy natao ny fanangonam-bola ho an'ny fanontàna ny taona 2016 mba hampiasaina hanampiana ny atleta Gorazd Nikoloski amin'ny adiny amin'ny homamiadana (#ЗаГого )
Nitarika adihevitra mafotaka ilay tetiandro, anisan'izany ny mikasika ny fampiasàna fiboridanana tanteraka.
Nanazava  ny heviny i Plavevski hoe:
Зашто да се фотографите за #ТвитерКалендар  pic.twitter.com/W68EX7Hakk 
Tsy fantatro hoe nahoana ny tetiandro Twitter no mampiseho fitanjahana. Saingy fantatro fa izay no fomba nahazatra azy, ary tiako ho tohizana ilay izy. Miankina aminao ny habetsahan'ny faritra amin'ny vatanao tianao haseho. Safidinao io raha maniry ny tsy hitonona anarana ianao na hampahafantarina ny maha-ianao anao. Na raha tianao haseho koa ny endrikao. Hamidy ny tetiandro avy eo ary hatao fanomezana ny vola azo. Arahabaina ianao raha manana fahatokiana sy herimpo.
Nampahafantarina  nandritra ny hetsika  iray tamin'ny 12 Desambra ilay tetiandro .
Nanomboka teo dia afaka nividy ireo dika mitovy voatonta avy amin'ny mpanoratra ireo mpividy sy ireo mpamatsy vola liana amin'izany.
Fotoana fampahafantarana ilay tetiandro [sary nalaina tao an'efitrano]
Tahaka ny famoahana teo aloha, ireo sary rehetra amin'ny tetiandro Twitter dia navoaka teo ambanin'ny lisansa Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0) avokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/21/78106/
 ny mpakasary Zvonko Plavevski: http://giottomkd.tumblr.com/
 fanadihadiana tamin'ny Twitter: https://twitter.com/Giotto_mkd/status/675054876779524096
 taona 2013 nanangonam-bola hanaovana sa soa ho an'ny ady atao amin'ny homamiadana: https://globalvoices.org/2012/12/24/macedonia-nude-art-twitter-calendar-for-charity/
 2014 nampiroboroboana ny fanabeazana ara-pananahana sy ny miralenta: https://globalvoices.org/2013/12/30/nude-twitter-calendar-promotes-sex-education-and-gender-equality-in-macedonia/
 hampiasaina hanampiana ny atleta Gorazd Nikoloski amin'ny adiny amin'ny homamiadana : http://gogetfunding.com/help-my-friend-to-win-the-fight-with-cancer/
 ny hetsika: http://it.mk/it-nastan-promotsija-na-erotskiot-tviterkalendar-2016-za-humanitarni-tseli/